बारम्बार सोधिने प्रश्नहरू | Find A Bible
खोज्नुहोस्-एक-बाइबल के छ?
खोज्नुहोस्-एक-बाइबल (फैब) संसारको 6000+ भाषा मा बाइबल लिंक र बाइबलीय स्रोतहरू प्रदान वेब निर्देशिका छ। यो फैब निर्देशिका मुख्यतया बाइबल एजेन्सीहरू को फोरम अन्तर्राष्ट्रीय (FOBAI) सदस्यहरूले सिर्जना सामग्री बनेको छ र मान्छे पत्ता लगाउन र भाषा र चेला, इंजीलवाद लागि आफ्नो विकल्प को मिडिया मा धर्मशास्त्र र बाइबलीय स्रोतहरू प्राप्त मदत गर्न इरादा छ, र चर्च रोपण । सम्बन्धित डेटाबेस र वितरण उपकरण सिर्जना थिए र डिजिटल बाइबल समाज (DBs) द्वारा कायम छन्। खोज्नुहोस्-एक-बाइबल बाइबल छाप्न लिंक को माथि बनेको छ, मुद्रण मागका बाइबल, डिजिटल बाइबल, अडियो बाइबल, दृश्य बाइबल र बाइबल स्रोतहरू - धेरै स्वरूप मा।
म कसरी पाउन-एक-बाइबल प्रयोग गर्छन्?
तपाईं भाषा, देश, प्रकार, वा संगठनले बाइबल र स्रोतसाधन पत्ता लगाउन सक्दछन्। भाषा द्वारा पत्ता लगाउन - खोज पल्ट मा भाषा मेनु तल आकर्षित वा भाषा को नाम टाइप गर्नुहोस्। तपाईं पनि भाषा कोड द्वारा खोज गर्न सक्छन्। देश खोज गर्न, घर पृष्ठमा नक्सामा क्लिक, र त्यसपछि त्यहाँ बोलेको ती देखि भाषा चयन गर्नुहोस्। भाषा पृष्ठ देखि तपाईं पहुँच गर्न चाहन्छु संसाधन को प्रकार गर्न संगत खास ट्याब चयन गर्नुहोस्। यो 'स्रोत' क्लिक, मिडिया द्वारा खोज [वा 'एजेन्सी द्वारा पाउन'] ट्याब, र त्यसपछि पृष्ठको बायाँ मा प्रदर्शित सूचीबाट संसाधन को प्रकार क्लिक गर्नुहोस्। संगठनले खोज गर्न, सदस्य क्लिक [वा 'एजेन्सी द्वारा पाउन'] गृह पृष्ठ को शीर्ष मा ट्याब। एजेन्सी को विशेष पृष्ठ देखि तपाईं एक भाषा मा, या त प्रकार चयन वा चयन FOBAI सदस्य द्वारा सिर्जना वा प्रायोजित स्रोतहरू पत्ता लगाउन मिडिया प्रकार मा क्लिक गर्नुहोस्।
कसरी गैर-अंग्रेजी वक्ता पाउन-एक-बाइबल प्रयोग गर्न सक्छौं?
खोज्नुहोस्-एक-बाइबल अंग्रेजी वक्ता द्वारा बनाएको छ, यो जानिजानि सबै भाषा को मानिसहरूले सजिलै सुलभ छ कि एक प्रतिमा-संचालित, सहज इन्टरफेस संग विकसित भएको छ। पनि समावेश संसारको 80 भन्दा बढी भाषामा पृष्ठ हेर्न गुगल विकल्प छ।
किन ढूँढें-एक-बाइबल बनाइयो थियो?
हरेक भाषा मा - पाउन-एक-बाइबल को मिशन संसारको बाइबल र ठूलो बाइबलीय स्रोतहरू, सुरक्षित, प्रयोग र शेयर पाउन सजिलो छन् कि सुनिश्चित गर्न छ। यो अनलाइन धर्मशास्त्र र बाइबल स्रोतहरू खोजी गर्न सम्भव छ, उपलब्ध सामाग्री को सरासर मात्रा भारी छ। र छैन हरेक धर्मशास्त्र खोज इन्जिन मा पत्ता छ। फलस्वरूप, FOBAI 2006 मा मिल-एक-बाइबल शुरू, र, 2013 मा, सिर्जना र बाइबल र बाइबल स्रोतहरू लागि देख मान्छे चिन्न र तिनीहरूलाई प्राप्त गर्न सक्छन् जहाँ इन्टरनेटमा एक स्थान कायम गर्न डिजिटल बाइबल समाज अह्राउनुभयो।
के पाउन-एक-बाइबल विशिष्ट बनाउँछ?
खोज्नुहोस्-एक-बाइबल प्रमुख बाइबल संसारको एजेन्सी र आफ्नो सम्बद्ध सबै बाइबल र बाइबलीय स्रोतहरू सजिलै पत्ता हो कि सुनिश्चित गर्न सँगै सहकार्य गर्न सहमत छन् जहाँ एकल डिजिटल मंच छ - हरेक भाषा मा। खोज्नुहोस्-एक-बाइबल न्यूनतम प्रयोगकर्ता प्रयास संग, छिटो सही र सान्दर्भिक जानकारी दिइरहेका एक सुविधाजनक हब हुन निर्माण भएको थियो। साथै, यो बाइबल वा कुनै खास भाषा मा प्रकाशित भएको छैन के पत्ता लगाउन खोजिरहेका बाइबल अनुवाद संस्थाका लागि एक संदर्भ बिन्दु रूपमा सेवा गरिरहेका छन्।
FOBAI र यसको सदस्यहरूलाई हुनुहुन्छ?
1990 मा स्थापित बाइबल एजेन्सीहरू अन्तर्राष्ट्रीय को फोरम (FOBAI), अधिक 25 अग्रणी अन्तरराष्ट्रिय बाइबल एजेन्सी र अधिक 120 देशहरुमा span र पाँच विभिन्न राष्ट्रका मा मुख्यालय छन् बाइबल-केन्द्रित मिशन संस्थाहरुको एक सम्बन्ध छ। सदस्य एजेंसियों को लजेन करार मा निस्कने सेट बाइबल आधारित विश्वास गर्न सदस्यता मुख्यधारा मसीही सम्पदाको र मिशन को एक विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिनिधित्व। यो सम्बन्ध एउटा सिङ्गो दर्शन मा स्थापित भएको थियो => परमेश्वरको वचन विश्वव्यापी पहुँच र प्रभाव अधिकतम गर्न सँगै काम। FOBAI सदस्य यो महान् आयोग को बाइबलीय जनादेश समर्थन गर्न, सहकार्य र सहयोग गर्न imperative छ कि विश्वास साझेदारी। फोरम सेवकाईमा व्यावसायिक उत्कृष्टता जगाउन कि परस्पर-एजेन्सी समझ र पालुङ्गो भागीदारी बलियो बनाउन अवस्थित (www.forum-intl.net)
कसले पाउन-एक-बाइबल सामग्री मालिक?
ढूँढें-एक-बाइबल निर्देशिका उपलब्ध बाइबल र बाइबल आधारित स्रोतहरू FOBAI को व्यक्तिगत सदस्यहरू वा समर्थन र संस्थाहरुको सम्पत्ति हो। सार्वजनिक गर्न खुलेर उपलब्ध छ ढूँढें-एक-बाइबल माध्यम केही सामाग्री सुलभ तापनि, अन्य स्रोतहरू सदस्यहरु वेबसाइटहरु देखि बिक्रीका लागि प्रस्ताव राखे छन्। खोज्नुहोस्-एक-बाइबलले पत्ता स्रोतको कुनै लागि कुनै पनि कपीराइट नै छैन न त यो बिक्री को लागि संसाधन प्रदान गर्छ।
कसको काम ढूँढें-एक-बाइबल वेबसाइट मा प्रतिबिम्बित छ?
अप्रिल 2013 मा, FOBAI ढूँढें-एक-बाइबल वेबसाइट डिजाइन, निर्माण र कायम गर्न डिजिटल बाइबल समाज अह्राउनुभयो। खोज्नुहोस्-एक-बाइबल प्रगतिमा काम छ र डिजिटल बाइबल समाज द्वारा नियमित अपडेट गरिनेछ। यहाँ प्रतिबिम्बित मेटाडाटा को भेला FOBAI माथि बनाउन धेरै भागीदारी संस्थाहरुको काम छ। प्रमुख प्रौद्योगिकी योगदान विश्वास द्वारा प्रदान गरिएको छ सुनवाई र येशूले फिलिम द्वारा आउनुहुन्छ। प्रमुख वित्तीय योगदान क्यानाडा को बाइबल लिग द्वारा प्रदान गरिएको छ। (www.BibleLeague.ca)। डिजिटल बाइबल समाज ख्रीष्टको शारीरिक संग साझेदार उत्पादन र हरेक भाषा मा चेला, इंजीलवाद, र चर्च रोपण बढाउन कि डिजिटल बाइबल र मसीही स्रोतहरू वितरण गर्न एक टेक्सास आधारित गैर-मुनाफा संगठन छ। डिजिटल बाइबल समाज अन्यथा आफ्नै भाषा (www.dbs.org) मा बाइबल कहिल्यै सक्छ गर्नेहरूका लागि डिजिटल पुस्तकालयहरु र बाइबल उपकरण बनाउन काम गर्दछ।
किन यो विश्व बाइबल पाउन लागि महत्त्वपूर्ण छ?
FOBAI को सदस्यहरूले बाइबल परमेश्वरको राज्यको अग्रिम र सबै मानिसहरू बीचमा ख्रीष्टको चेलाहरूले बनाउन मा एक केन्द्रीय भूमिका गरिरहेका हुनेछौं भन्ने विश्वास। यद्यपि आफ्नै भाषा मा बाइबल उत्कृष्ट स्रोतहरू हासिल संसारभरि मसीही विश्वासीहरूलाई, खोज्नेहरूको र मिशन कामदारहरूको लागि एकल सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता हुन जारी। पत्ता लगाउने-एक-बाइबल निर्देशिका बाइबल कुनै दिइएको भाषा मा अवस्थित र चेला, इंजीलवाद र चर्च रोपण लागि भाषा विशिष्ट स्रोतहरू कहाँ प्राप्त गर्न सकिन्छ के प्रकाश बगाउने द्वारा कि आवश्यकता सम्बोधन गर्न इरादा छ।
किन पाउन-एक-बाइबल गर्छ बाइबल भन्दा अन्य स्रोतहरू समावेश?
FOBAI सदस्य परमेश्वरको वचन जीवन बदलन शक्ति हरेक भाषा मानिसहरूलाई परिचय मदत गर्न स्रोतको एक विस्तृत विविधता सिर्जना गरेका छन्। एक-बाइबल पाउन-गरेको मुख्य उद्देश्य धर्मशास्त्र पहुँच प्रदान गर्न छ तापनि, निर्देशिका बाइबल सगाई बढाउन मदत भनेर बहु-बहुभाषी, बाइबल आधारित स्रोतको एक बढ्दै संग्रह सामेल छन्।
के सामाग्री ढूँढें-एक-बाइबल लागि उपयुक्त छन्?
बाइबल र बाइबल सम्बन्धित सामाग्री FOBAI को सदस्यहरूले उपयुक्त ढूँढें-एक-बाइबल निर्देशिका देखिनका लागि भेला बुझयो।
कसरी एक संगठन पाउन-एक-बाइबल आफ्नो बाइबल वा बाइबलीय सामग्री थप्न सक्नुहुन्छ?
FOBAI तर्फबाट, डिजिटल बाइबल समाज कडा आफ्नो संगठन FOBAI सदस्यता विचार भनेर सुझाव। साथै, यो एक FOBAI सदस्य ढूँढें-एक-बाइबल निर्देशिका देखिनका लागि आफ्नो संगठनले सिर्जना सामग्री प्रायोजक लागि पनि सम्भव छ। बाइबल संगठन र मसीही Ministries थप जानकारीको लागि FOBAI वा डिजिटल बाइबल समाज सम्पर्क स्वागत छन्।
म ढूँढें-एक-बाइबल माध्यम पहुँच कि डाउनलोड साझेदारी गर्न सक्नुहुन्छ?
मा सामाग्री पत्ता बनाउँछ कि प्रत्येक संगठन पाउन-एक-बाइबल स्तर र उपयोग, दोहराव र वितरण लागि प्रतिबन्धको को एक सेट पहिचान छ। एक विशिष्ट संसाधन र एजेन्सी गर्न अनुकूल को प्रतिलिपि जानकारी जाँच गर्नुहोस्। तथापि, सार्वजनिक डोमेन वा रचनात्मक कमन्स हो कि बाइबल र सामग्री, अन्यथा संकेत नभएसम्म, खुलेर shareable छन्।
अद्यावधिक कसरी संभाला गरिनेछ?
खोज्नुहोस्-एक-बाइबल अद्यावधिक मासिक लागू गरिनेछ। एक संगठन फैब देखिनका लागि सामाग्री पेश भएपछि, ती अघि केही हप्ता को फैब डेटाबेस प्रतिबिम्बित छन् अनुमति गर्नुहोस्।
म कसरी पाउन-एक-बाइबल को निरन्तर काम समर्थन गर्न सक्छौं?
हामी निम्न क्षेत्रमा आफ्नो समर्थन स्वागत: यो संसाधन सबैभन्दा बनाउन र पाउन-एक-बाइबल कि तपाईं सुझाव <br> हाम्रो निर्देशिका छैन थाह बाइबल र बाइबल आधारित सामग्री बारेमा बताउँदा <br> अवस्थित शब्द फैलाउन ढूँढें-एक-बाइबल साइट सुधार पाउन-एक-बाइबल र डिजिटल बाइबल समाज, FOBAI को मिशन लागि प्रार्थना <br>। को निरन्तर काम अनुदान <br> पाउन-एक-बाइबल। <br>
बाइबल एजेन्सीहरू को फोरम
Forum Site धर्मशास्त्र व्यस्तता अनुवाद समूह
Members Forum Facebook क्षेत्रीय फोरम